Man United oo guul gaartay, xilli Arsenal lagu dhagay & guud ahaan natiijooyinka kulammadii lugta hore wareega siddeeda ee tartanka Europa League… +SAWIRRO – Gool FM
(Yurub) 09 Abriil 2021. Manchester United ayaa guul muhiim ah kaga soo gaartay kooxda Granada garoonka Estadio Nuevo Los Carmenes oo ay ku booqatay kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada lugta hore wareega siddeeda ee tartanka UEFA Europa League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Manchester United.
Daqiiqadii 31-aad Manchester United ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Marcus Rashford, kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Victor Nilsson Lindeloef.
Daqiiqadii 90-aad kooxda Manchester United ayaa loo dhigay rigoore, waxaan gool u badelay xiddigooda Bruno Fernandes, ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 0-2 ay ku hoggaamineysay United-ka.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku dhamaatay 0-2 ay kaga soo adkaatay Manchester United kooxda Granada oo ay ku booqatay garoonka Estadio Nuevo Los Carmenes, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulammada lugta hore wareega siddeed dhamaadka ee tartanka UEFA Europa League.
Haddaba halkaan hoose ka eeg guud ahaan natiijooyinka kulammadii wareega siddeed dhamaadka ee caawa laga ciyaaray tartanka xiisaha badan ee UEFA Europa League:
Granada 0 – 2 Manchester United.